Konvertuoti Bitcoins (BTC) ir Eurų (EUR) : Valiuta valiutų keitimo kurso skaičiuoklė, 1 btc į mnt
Qalabka lacagta lacagta lagu beddelanayo - qiimaha maanta ee sicirka lacagta ee adduunka oo dhan. Macluumaadka isha laga keenay.
Macluumaadka ku saabsan heerka sarrifka ee ilaha furan. Heerka sarrifka ee Tokia to Tugrik Mongoliyaan waa aasaaska suuqyada crypto iyo sarrifka ay hadda ku jiraan. Waa tan tixraaca maalinlaha ah ee bilaashka ah ee sicirka sarrifka lacagaha 'lacagta digital'.
Suuqa sarrifka rasmiga 1 btc į mnt ee suuqa crypto. Tokia sicirka sarrifka ayaa sare u kacaya Tugrik Mongoliyaan marka loo eego Yurub.
Marka loo eego 1 Tokia hadda waxaad u baahan tahay inaad ku bixiso Tokia In Tugrik Mongoliyaan Heerka Sarrifka maanta 23 June Aad bay ugu habboon tahay in la isbarbardhigo Tokia to Tugrik Mongoliyaan sicirka sarrifka ee maalmihii ugu dambeeyay miiska sicirka sarrifka ugu dambeeyay ee boggan. Isbarbar dhig qiimaha sarrifka ee maanta, shalay, iyo maalmihii u dambeeyay si loo go'aamiyo heerka koritaanka ama dhicitaanka doorshada 'lacagta digital'.